Shiinaha Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 khadadka bey'adda wax soo saarka liinta bey'ada u fiican bay'ada iyo soo saarayaasha | Yahuuda
Xuduudaha farsamada iyo miiska waxqabadka
Aag la haysto
Dherer wax ku ool ah
Anthracite, 2-4cm, qiime kaloriin ka badan 6800 kcal / kg
125-130 kg dhuxul caadi ah 1 tan oo lime ah
Qaabdhismeedka birta dibedda iyo dahaadhka dabka
Suunka rarka leh ee daboolan
Dhuxusha iyo dhagaxa nuuradda qaybinaya
Afarta dhinac Bixinta
Soo bixinta boodhka
Ka-qaadista boodhka duufaanka + hiitarka-tubbooyin badan + nooca bac-ka-saarista + boodhka filka biyaha lagu nadiifiyo
Kumbuyuutar si buuxda otomaatig u ah
1 hawl wadeenka barnaamijka;
1 farsamo yaqaan kiln;
1 shaqaale dayactir;
1 darawal wadaha
120-150 maalmood oo shaqo oo waxtar leh
Shuruudaha tilmaanta dhagaxa liinta
Kaalshiyam kaalshiyam ah
Lebbis isku mid ah oo nadiif ah
Ma jiro budo dhagax ah, dhoobo jaale ah oo dusha dhagaxa ah kuma taal
Shuruudaha tusmada dhuxusha
Qiimaha Calorific Net
lafdhabar u ah
Dhuxul aan budo lahayn
Heerarka tayada liinta
soodhaha caustic /%
Waxqabadka / mL
fasal gaar ah
Pdaadin Pastaan ​​：
1, Awoodda wax soo saar ee loogu talagalay waa 100-300 tan oo lime dhaqso ah maalintii. Dhexroorka kiliyaha ayaa loo xushay inuu ahaado 4.0 -6.0meters, dhexroorka banaanka waa 6.5 -8.5meters, dhererka wax ku oolka ah ee jirka foornada waa 30-33 mitir wadarta guudna waa 38-45meters.
2 Nuuradda ceelka ceedhin iyo dhuxul dhagaxda waxay ka yimaadaan macdanta iyo miinooyinka dhow kuwaas oo yareyn kara kharashka gaadiidka.
3, Cabbirka walxaha dhagaxa: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4 、 Dhagaxa iyo dhuxusha si sax ah ayaa loo miisaamay iyadoo la qiyaasayo dareemayaal.
5 material Waxyaabaha diidan ee ku jira qorshahani waa hal lakab oo ah dabka xajmiga ah + hal lakab oo leben guduudan ah + hal lakab oo ah aluminium silicate ah oo la dareemay + biyo dhagaxa.
6, Boorka iyo qiiqa ay kujiraan boodhka ayaa qaata hanaanka ka saarida boodhka ee aruuriyaha boodhka duufaanta + nooca bacaha urursada + filimka biyaha wasakhda ururiya. Daaweynta ka dib, siigada waxaa loo siidayaa si adag iyadoo la raacayo heerarka aqbalaadda maxalliga ah.
7 、Miisaaniyaddu waxay u dhaxaysaa baaldiyo batching (laga bilaabo) ilaa lime suunka sii deynta (jooji), marka laga reebo aasaaska foornada, aasaaska boodhka iyo qolka kontoroolka korantada
Nidaamka wax lagu dhufto: dhagaxa iyo dhuxusha waxaa loo kala qaadaa siday u kala horreeyaan dhagaxa iyo baaldiyo dhuxusha leh suumano; Dhagaxa miisaamaya ayaa markaa lagu quudinayaa suunka isku dhafka iyada oo loo marayo sheyga.
Nidaamka quudinta: dhagaxa iyo dhuxusha lagu keydiyo suunka isku dhafan ayaa loo qaadaa buurta, taas oo ay maamusho dabaysha si ay ka dhigto wareejinta kor iyo hoos ee quudinta, taas oo hagaajinaysa xaddiga gaadiidka isla markaana gaadha waxtarka sare iyo keydinta tamarta.
Nidaamka wax loo qaybiyo: isku darka dhagaxa iyo dhuxusha ayaa lagu quudiyaa keydka keydka ee loo maro keydiyaha iyadoo la marinayo quudiyaha wareega ah. Isku darka ayaa si isku mid ah loogu quudiyaa qaybta sare ee foornada iyada oo loo marayo sheyga muruqyada badan ee wareega.
Nidaamka soo saarista Lime: ka dib marka la qaboojiyo dhagaxa nuuradda calcined, liinta la dhammeeyay ayaa loo sii daayaa suunka ka soo baxa liinta iyadoo loo marayo mashiinka soo dejinta afarta dhinac iyo laba qaybood oo waalka qufulka hawada ah. Haddii ay dhacdo toogashadu, jihada iyo xaddiga ka soo baxa liinta waa la waafajin karaa si loo gaaro daminta dabka iyo xudunta-jiida.
Nidaamka ka saarida Boorka: ka dib markii uu soo baxay naqshad jilicsan, boodhka ay ku jirto qiiqa iyo gaaska ayaa marka hore loo maraa aruuriyaha boodhka duufaanka si looga saaro qaybaha waaweyn ee boodhka; Kadibna la galiyo shaandhada bacda si looga saaro qaybaha yaryar ee boodhka; Ka dib markii la galo filimka filimka biyaha, qiiqa gaaska ayaa xoqin doona filimka biyaha markasta, qiiqa wasakhda ahna waa la qoyn doonaa. Waxay gali doontaa gunta sagxadda boodhka ee socodka biyaha waxaana lagu sii deyn doonaa haanta qashinka. Roob ka dib, biyaha nadiifta ah dib ayaa loo isticmaali doonaa.
Nidaamka xakamaynta korantada: qaadashada nidaamka xakamaynta kumbuyuutarrada Jarmalka ee Siemens, khadka tooska ah ee wax soo saarka tooska ah, kharash-badbaadin, tayada wax soo saarka oo deggan
Hore: Juda kiln -300T / D line-soo-saarka -EPC mashruuca
Xiga: Juda kiln -200T / D 3 khadadka wax soo saarka - Mashruuca EPC
Qalabka Lime Kiln
Lime Kiln Khadka
Soosaarayaasha Kilyaha Lime
Nidaamka Lime Kilinka
Soosaarka Lime Kiln
Qiyaasta Juda - 100 tan / maalintii wax soo saar ...
I. Muhiimadda ay leedahay soosaarida Lime-ga casriga ah ee lime-ka casriga ah waa waxyaabaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan ee wax soo saarka birta, soosaarida kaalshiyamka kaalshiyamka, soosaarka diidmada, soosaarka alumina. Gaar ahaan xilligan cusub, tikniyoolajiyad cusub, alaabooyin cusub ayaa sii wadaya inay soo saaraan walxaha kaalshiyamka oo aad iyo aad loo adeegsado. Tababarku wuxuu caddeeyay in tiknoolajiyada casriga ah ee lime-ka casriga ahi runtii ay tahay mid aad u macquul ah oo faa'iido u leh barta gaaban ee dhalaalaysa shirkadaha birta iyo birta, shirkadaha kalsiyum carbide ...
11. Nidaamka hawo bixinta Maalmahan, inta badan dhalada lime kaliya waxay siisaa hawo xagga hoose, oo aan si siman loo qaybin, una nugul ifafaalaha gubitaanka qayb ahaan, soo saarida xudunta, coking iyo sifaynta qarka. Dabaysha cadaadiska sare leh ee ay soo saarto taageereyaasheena gubista ee gaarka ahi waxay u kacdaa aagga calcining iyada oo loo sii marayo aagga qaboojinta ee salka hoose ee foornada. Aagga qaboojinta ayaa runtii ah aag isweydaarsiga kuleylka. Heerkulka liinta ayaa si aad ah hoos ugu dhacaya marka heer kulka dabiiciga uu kaco iyadoo leh heer kul sarreeya ...
6.Cuntiyaha Hizizal Qeybiyaha jiifka ee jirka foornada wuxuu leeyahay qaab gaar ah. Waxay isku qasan kartaa nuuradda iyo dhuxusha si siman, u daadi barta go'an ee aagga kululaynta ee dusha sare ee foornada, iyo dusha sare ee maaddada waa mid siman oo siman, sidaa darteed dhuxusha dhuxusha waa loo kululeeyaa oo loo siman yahay. Tan kasta oo liimeed ah waxay keydisaa in ka badan 15 Kg oo dhuxul ah marka la barbar dhigo hababka kale ee loo qaybiyo Samaynta, kuwa wax guba iyo waxyaabaha kale ee loogu talagalay kilkilooyinka lime: Qalabka ugu weyn ee kaabayaasha lime-ka ayaa i quudinaya ...
Juda Kiln – Wareeg saxan afar-dhinac soo saare
9. Nidaamka dambas Mabda'a mashiinka soo dejinta ash ee afar-geesoodka ah ayaa ah in liinta jirka foornada laga soo dajiyo si siman oo habsami leh hawo-qaadka ash-ka ee dheecaanka ka baxa, iyo nuuradda baaldi ku jira ayaa laga soo saaraa foornada iyada oo loo marayo laba waalka furaha. Mashiinka soo dejinta ash ee afar-geesoodka ah ayaa ah afar aaladood oo kala duwan oo ash-dajinta laga dejinayo, iskuna tiirsan oo madax bannaan. Astaamaha farsamada ee qalabka soo dejinta ash-ka afar gees leh: 1. Qaab dhismeedka si buuxda u xiran oo ay sameysay aaladda afar-geesoodka ee dheecaanka ash iyo gambaleelka ...
Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,